सीमांकन र नामांकन किन गार्हो भएको?
वाक स्वतंत्रता पनि गार्हो हो। यसरी। देशका नागरिक लाई वाक स्वतंत्रता दिने भन्ने निर्णय गर्ने बाहुन सरकार ले र त्यो कार्यान्वयन गर्न बामे लाई अर्हयाउने। के हुन्छ? बामे ले लिस्ट बनाउन थाल्छ। जनता लाई बोल्ने छुट दिने भनेको छ। त्यों गहन जिम्मेवारी मेरो काँध मा आएको छ। बोल्न हुने कुरा को लिस्ट लामो होला। बरु बोल्न नहुने कुरा हरु के त्यहाँ बाट शुरू गरौं। अरु नेता हरु सँग पनि सरसल्लाह गर्ने कि? सहमति त खोजनै पर्यो। बिज्ञ हरु को पनि सल्लाह लिंदा राम्रै होला कि कसो? अनि लिस्ट बनाउन थाल्छ। सरकार सँग थप समय माग्छ। अझै दुई महिना भन्दै चार पाँच पटक समय माग्छ। सहमति बड़ो गार्हो। कहिले कसले नमान्ने, कहिले कसले नमान्ने। जनता सँग सुझाव माग्यो त्योभन्दा गार्हो।
त्यो हो तरिका? वाक स्वतंत्रता त सिद्धांत हो। कि छ कि छैन। धर्म निरपेक्षता त सिद्धांत हो। कि छ कि छैन। संघीयता पनि सिद्धांत हो। सीमांकन र नामांकन केही गार्हो छैन। बाहुन हरुले गार्हो भयो भनेको हामीलाई त बेइमानी गर्न मन लाग्यो भनेको मात्र हो। स्वांग गरेको।
सीमांकन र नामांकन किन गार्हो भएको? गार्हो भएको छैन। खुट्टा घिसारने काम मात्र भएको छ।
कमल थापा लाई गणतंत्र बारे लेख भनेर जिम्मेवारी दिएको भए उसले के लेखथ्यो होला? अहिले सीमांकन र नामांकन मा विवाद छ भन्ने हरु संघीयता का कमल थापा नै हुन।